नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जागिर खुल्यो, सूचना हेर्नुहोस् access_timeफागुन २, २०७६
काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नेगरी दरखास्त आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले अधिकृतस्तर, सहायकस्तर, लेखापाल, सुपरभाइजर, ड्राप्टमेन, मिटर रिडर, सहायक ...
नेपाल वायुसेवा निगमले माग्यो १८ पदमा १५९ कर्मचारी (सूचनासहित) access_timeफागुन २, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले विभिन्न १८ पदमा १५९ जना कर्मचारी माग गरेको छ । निगमले खुल्ला तथा समावेशी प्रावधानमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्नेगरी दरखास्त आह्वान गरेको हो । निगमले शुक्रबार जारी गरेको सूचनाअनुसार सिनिरयर क्याप्टेन, जुनियर क्याप्टेन, वरिष्ठ प्राविध...
जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्समा कर्मचारीको माग access_timeमाघ २२, २०७६
काठमाडौँ । के तपाईँ रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, युएनडीपी नेपाललगायतले कर्मचारीको माग गरेका छन् । सूचना हेर्नुहोस्ः
सिद्धार्थ बैंकमा रोजगारीको अवसर access_timeमाघ २०, २०७६
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैठकले विभिन्न तीन पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले जुनियर अफिसर, जुनियर सहायक र सहायक तहमा कर्मचारी माग गरेको हो । सूचना हेर्नुहोस्
नेपाल आयल निगमले खुलायो विभिन्न २२ पदमा जागिर access_timeमाघ १०, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले विभिन्न २२ पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । निगमले खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नेगरी दरखास्त आह्वान गरेको हो । इच्छुक नेपाली नागरिकले २१ दिनभित्र अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
नेपाल टेलिभिजनमा जागिर खुल्यो (सूचनासहित) access_timeमाघ १०, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । लोकसेवा आयोगको सहमति बमोजिम टेलिभिजनले खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नेगरी दरखास्त आह्वान गरेको हो । इच्छुक र योग्यता पुगेका उम्मेदवारले फागुन १ गतेसम्म र दोब्बर दस्तु...
कहाँ-कहाँ छ जागिर ? रोजगारीसम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस् access_timeमाघ ८, २०७६
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा जागिरः लिखितको नतिजा आयो access_timeमाघ ८, २०७६
काठमाडौँ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्दले स्थायी पदपूर्तिका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारीको माग गरेअनुसार भएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रले सफल उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको छ ।
कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षा तालिका सार्वजनिक (सूचनासहित) access_timeमाघ ८, २०७६
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै २०७७ सालको कक्षा ११ र १२ को साधरण तथा प्राविधिक विषय समूहतर्फका नियमित ग्रेडवृद्धि एवम् आंशिक परीक्षाहरुको वार्षिक परीक्षाक...
नेपाली सेनामा भर्ना खुल्यो (सूचनासहित) access_timeमाघ ७, २०७६
काठमाडौँ । नेपाली सेनाले विभिन्न पदमा भर्ना खुला गरेको छ । सेनाले मंगलबार जारी गरेको भर्नासम्बन्धी सूचनामा प्राविधक र सैन्यतर्फ खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न पदमा खुलाइएको सो विज्ञापनमा मंगलबारदेखि आगामी फागुन ७ गतेस...
कहाँ-कहाँ छ जागिर ? रोजगारीसम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस् access_timeपुस २९, २०७६
मुक्तिनाथ विकास बैंकले माग्यो कर्मचारी (सूचनासहित) access_timeपुस २३, २०७६
काठमाडौँ । मु्क्तिनाथ विकास बैंकले विभिन्न ३ पदमा गरी १३५ जना कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले काठमाडौँ भित्र र बाहिर काम गर्ने गरी म्यानेजमेन्ट ट्रेनी २५ जना माग गरेको छ भने ट्रेनी असिस्टेन्ट ८० जना माग गरेको छ । यस्तै एसएमबी (स्मल एण्ड माइक्रो बैंकिङ&ndas...
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले माग्यो २३२ सहायक सूचक, एसएलसी पासले पनि आवेदन दिनसक्ने access_timeपुस १८, २०७६
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २३२ सहायक सूचकको लागि आवेदन माग गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा भएका गतिविधिबारेमा गोप्य रुपमा सूचना लिनका लागि ती सूचकहरु नियुक्त गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । विभागद्वारा शुक्रबार गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापनका अनुसार विभागमा रि...
कहाँ-कहाँ छ जागिर ? रोजगारीसम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस् access_timeपुस १४, २०७६
रिलायबल इन्स्योरेन्ससहित विभिन्न संस्थाले मागे कर्मचारी access_timeपुस १३, २०७६
काठमाडौँ । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससहित विभिन्न संस्थाले कर्मचारी माग गरेका छन् । कर्मचारी मागसम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्ः